Inkqubo yokuQinisa ukuQinisa iiNkqubo zokuSebenza-i-HLQ Heater Heater
I-Induction Inkqubo yokuKhangela umphezulu wesicelo
Yintoni ukuqina koqheliso?
Ukukhupha nzima luhlobo lonyango lobushushu apho icandelo lesinyithi elinomxholo wekhabhoni owaneleyo lifudunyezwa kwicandelo lokungeniswa kwaye lipholile ngokukhawuleza. Oku kwonyusa kokubini ubunzima kunye nokuba krwada kwenxalenye. Ukufudumeza i-induction kukuvumela ukuba ubenendawo yokufudumeza kubushushu obuchazwe kwangaphambili kwaye ikwenza ukuba ulawule ngokuchanekileyo inkqubo yokuqina. Inkqubo yokuphindaphinda iqinisekisiwe. Ngokwesiqhelo, ukuqina kwe-induction kusetyenziswa kumalungu esinyithi afuna ukubanomgangatho omkhulu wokunxiba, ngelixa kwangaxeshanye kugcinwa iipropathi zoomatshini. Emva kokuba inkqubo yokuqiniswa kwe-induction ifezekisiwe, into yokusebenza yesinyithi kufuneka icinywe emanzini, kwioyile okanye ngaphakathi komoya ukufumana iipropathi ezithile zomaleko womphezulu.
Ukukhupha nzima yindlela ekhawulezayo kunye nokukhetha ukuqina komphezulu wenxalenye yesinyithi. Ikhoyili yobhedu ephethe inqanaba elibonakalayo lokutshintsha okwangoku ibekwe kufutshane (ingachukumisi) icandelo. Ubushushu buveliswa kufutshane nomphezulu welahleko yangoku ye-eddy kunye ne-hysteresis. Ukucima, kuhlala kusekwe emanzini kunye nokongezwa okufana nepolymer, ijolise kwinxalenye okanye igxunyekwe. Oku kuguqula ulwakhiwo lube yi-martensite, olunzima kakhulu kunolwakhiwo lwangaphambili.
Uhlobo oludumileyo, lwangoku lwezixhobo ezomeleleyo zoqheliso kuthiwa siskena. Inxalenye ibanjwe phakathi kwamaziko, ijikelezwe, kwaye yadlula kwikhoyili eqhubekayo enikezela ubushushu nokucima. Ukucima kuqondiswe ngezantsi kwekhoyili, ke nayiphi na indawo enikiweyo yenxalenye ipholile ngokukhawuleza emva kokufudumeza. Inqanaba lamandla, ixesha lokuhlala, ukuskena (ukutya) inqanaba kunye nezinye izinto eziguqulweyo zilawulwa ngokuchanekileyo yikhompyuter.
Inkqubo yokuqinisa imeko esetyenziselwa ukonyusa ukunxiba, ubunzima bomhlaba kunye nobomi bokukhathala ngokudala umaleko womphezulu oqinileyo ngelixa kugcinwa ubume obuncinci bokuchaphazeleka.
Ukukhupha nzima isetyenziselwa ukwandisa iipropathi zoomatshini bezinto ezomeleleyo kwindawo ethile. Izicelo eziqhelekileyo ziyi-powertrain, ukunqunyanyiswa, izinto zenjini kunye nezitampu. Ukukhutshwa kwe-induction kubaluleke kakhulu ekulungiseni amabango ewaranti / ukusilela kwentsimi. Izibonelelo eziphambili kukuphuculwa kwamandla, ukudinwa kunye nokunxiba ukuxhathisa kwindawo esekhaya ngaphandle kokuyila kwakhona icandelo.
Iinkqubo kunye noShishino olunokuthi luxhamle kukomeleza ngokungeniswa
Tube & Pipe Ukuqinisa
Izibonelelo zoKwenza nzima:
Ilungiselelwe izinto eziphantsi kokulayisha okunzima. Ukuchithwa kunika ubunzima obuphezulu obuphezulu kunye neemeko ezinzulu ezikwazi ukuphatha imithwalo ephezulu kakhulu. Amandla okukhathala ayonyuswa ngokuphuhliswa kwesiseko esithambileyo esingqongwe ngumaleko ongaphandle onzima kakhulu. Ezi propati zinqweneleka kumacandelo afumana ukulayishwa kwetorsional kunye nemiphezulu enamava empembelelo. Ukulungiswa kwe-induction kwenziwa icandelo elinye ngexesha livumela intshukumo eqikelelweyo kakhulu ukusuka kwinqanaba ukuya kwinxalenye.
Ulawulo oluchanekileyo kubushushu kunye nobunzima bokuqina
Ukufudumeza okulawulwayo nokwasekhaya
Idityaniswe ngokulula kwimigca yemveliso
Inkqubo ekhawulezayo nephindaphindwayo
Umsebenzi ngamnye unokwenziwa lukhuni ngeparamitha ezichanekileyo ezichanekileyo
Inkqubo eyonga umbane
Izinto zentsimbi kunye neentsimbi ezingenasici ezinokuba lukhuni ngokungeniswa:
Izinto zokubopha, ii-flanges, iigiya, iibheringi, ityhubhu, ugqatso lwangaphakathi nolwangaphandle, iicrapshafts, ii-camshafts, iidyokhwe, iidrive shafts, i-shafts, i-spindles, i-torsion bar, i-slewing ring, i-wire, i-valves, i-rock drill, njl.
Ukonyuka kwe-Wear Resistance
Kukho unxibelelwano ngqo phakathi kobulukhuni kunye nokunxiba ukuxhathisa. Ukuxhathisa ukunxiba kwenxalenye kuyanda kakhulu ngokuqina koqheliso, kucingelwa ukuba imeko yokuqala yento ibifakwisiwe, okanye inyangwa kwimeko ethambileyo.
Ukomelela kwamandla kunye noBomi boMdinwa ngenxa yeCore Core kunye nokuSala koXinzelelo loXinzelelo kuMgangatho
Uxinzelelo olucinezelekileyo (oluhlala luthathelwa ingqalelo njengophawu oluqinisekileyo) sisiphumo sobume obomeleleyo kufutshane nomphezulu wokuhlala umthamo ongaphezulu kophambili kunye nolwakhiwo lwangaphambili.
Iinxalenye zinokuba Nobulali emva Ukukhutshwa ngokukhawuleza Ukulungelelanisa iNqanaba lokuQiniseka, njengoko unqwenela njalo
Njengayo nayiphi na inkqubo evelisa ulwakhiwo lwe-martensitic, i-tempering iya kunciphisa ubunzima ngelixa kuncipha ubukrwada.
Ityala elinzulu ngeCore eQinisekileyo
Ubunzulu bamatyala oqhelekileyo ngu -030 "- .120" obunzulu ngokomndilili kuneenkqubo ezinje nge-carburizing, carbonitriding, kunye neendlela ezahlukeneyo ze-nitriding ezenziwa kumaqondo obushushu aphantsi. Kwiiprojekthi ezithile ezinje ngee-asi, okanye iinxalenye eziseluncedo nasemva kokuba izinto ezininzi ziphelile, ubunzulu becala bunokuya kwi-intshi okanye ngaphezulu.
Inkqubo ekhethiweyo yokuQinisa ngaphandle kweMasking efunekayo
Iindawo ezinendawo yentsimbi eyothunyelweyo okanye ezenziwa emva komatshini zihlala zithambile- zimbalwa kakhulu ezinye iinkqubo zokuphatha ubushushu ezinako ukufezekisa oku.
Umzekelo: ishafti 1 "Ø x 40" ubude, eneejenali ezimbini ezibekwe ngokulinganayo, nganye kwezi-2 "zifuna inkxaso yomthwalo kwaye zinxibe ukuxhathisa. Ukuqiniswa kwe-induction kwenziwa kwezi ndawo kuphela, ubude be-4 "ubude. Ngendlela eqhelekileyo (okanye ukuba sinyanzelisa ubunzima bonke kulo mbandela), kuya kubakho ngakumbi iphepha lemfazwe.
Ivumela ukusetyenziswa kwee-Steels eziphantsi kwexabiso njenge-1045
Esona sinyithi sithandwayo sisetyenziselwe iinxalenye eziza kuqhelaniswa senziwe nzima yi-1045. Iyashenxiseka ngokulula, ixabiso eliphantsi, kwaye ngenxa yomxholo wekhabhoni oyi-0.45% ngegama, inokuba lukhuni lube yi-HRR engama-58. Ikwanomngcipheko ophantsi wokuqhekeka ngexesha lonyango. Ezinye izinto ezithandwayo kule nkqubo zi-1141/1144, 4140, 4340, ETD150, kunye neentsimbi ezahlukeneyo.
Imida yoKwenza nzima
Ifuna i-Coil ye-Induction kunye nezixhobo ezinxulumene neGeometry yenxalenye
Kuba umgama wokudibanisa ukuya kwikhoyili ubalulekile ekusebenziseni ubushushu, ubungakanani bekhoyili kunye nentaba kufuneka kukhethwe ngononophelo. Ngelixa uninzi lwabaphathi benesigcini sekhoyili ezisisiseko zokufudumeza iimilo ezijikelezileyo ezinje ngemingxunya, izikhonkwane, izileyi njl.njl., Ezinye iiprojekthi zinokufuna ikhoyili yesiqhelo, ngamanye amaxesha ibiza amawaka eedola. Kwiiprojekthi eziphakathi ukuya phezulu, isibonelelo sokwehlisa iindleko zonyango ngenxalenye nganye sinokunciphisa iindleko zekhoyili. Ngamanye amaxesha, izibonelelo zobunjineli zenkqubo zinokugqwesa inkxalabo yeendleko. Ngaphandle koko, kwiiprojekthi ezinomthamo ophantsi iikhoyili kunye neendleko zezixhobo zihlala zenza ukuba inkqubo ingasebenzi xa kufuneka kwakhiwe iikhoyili entsha. Inxalenye kufuneka ixhaswe ngandlela thile ngexesha lonyango. Ukubaleka phakathi kwamaziko kuyindlela eyaziwayo yamacandelo e-shaft, kodwa kwezinye iimeko ukusetyenziswa kwezixhobo ngokwesiko kufuneka kusetyenziswe.
Ubukhulu obukhulu bokuqhekeka xa kuthelekiswa neenkqubo ezininzi zonyango lobushushu
Oku kungenxa yokufudumeza ngokukhawuleza nokucima, kunye notyekelo lokwenza amabala ashushu kwiimpawu / kwimiphetho enje: iindlela eziphambili, imijelo, imingxunya enqamlezileyo, imisonto.
Ukuphazamiseka kunye ne-Induction Hardening
Amanqanaba okwahlula athambekele ekubeni mkhulu kuneenkqubo ezinje nge-ion okanye i-nitriding yegesi, ngenxa yobushushu / ukucima okukhawulezileyo kunye nesiphumo sotshintsho lwe-martensitic. Oko bekutshiwo, ukuqina kwe-induction kunokuvelisa ukuphazamiseka okuncinci kunokunyanga okuqhelekileyo kobushushu, ngakumbi xa kusenziwa kuphela kwindawo ekhethiweyo.
Uthintelo lwezixhobo kunye ne-Induction Harding
ukusukela Inkqubo yokwenza lukhuni ayihlali ibandakanya ukusasazeka kwekhabhoni okanye ezinye izinto, umbandela kufuneka ube nekhabhoni eyoneleyo kunye nezinye izinto ukubonelela ngobunzima bokuxhasa inguquko ye-martensitic ukuya kwinqanaba lobunzima obufunwayo. Oku kuthetha ukuba ikharbon ikuluhlu lwe-0.40% +, ukuvelisa ubunzima be-56-65 HRC. Izinto ezisezantsi zekhabhoni ezinje nge-8620 zinokusetyenziselwa ukunciphisa ukubakho kobunzima obunokufikeleleka (40-45 HRC kule meko). Ii-Steels ezinje nge-1008, 1010, 12L14, 1117 azisetyenziswanga ngenxa yokwanda okulinganiselweyo kobunzima obunokufikelelwa.
Iinkcukacha zeNkqubo yokuPhakanyiswa kobunzima
Ukukhupha nzima yinkqubo esetyenziselwa ukuqina komphezulu wentsimbi kunye nezinye izinto zentsimbi. Amalungu anokunyangwa ngobushushu abekwe ngaphakathi kwekhoyili yobhedu emva koko afudunyezwe ngaphezulu kwamaqondo obushushu otshintsho ngokusebenzisa enye i-coil yangoku. Ukutshintshatshintsha okwangoku kwikhoyili kubangela ukuba kutshintshwe umazibuthe ngaphakathi kwesiqwenga somsebenzi esibangela ukuba umphandle wesahlulo ubushushu kubushushu obungaphezulu koluhlu lwenguqu.
Amacandelo afudunyezwa kusetyenziswa enye intsimi yemagnethi kwiqondo lobushushu ngaphakathi okanye ngaphezulu kwoluhlu lwenguqu olulandelwa kukucinywa kwangoko. Yinkqubo yombane usebenzisa i-coil ye-inductor yobhedu, eyondliwa yangoku kwinqanaba elithile kunye nenqanaba lamandla.
iindidi FAQ, Teknoloji tags thenga umatshini onzima wokungenisa, ukwenza lukhuni, ukuqina koqheliso, lukhuni, inkqubo umphezulu lukhuni, ukutyhutyiswa kokutshisa, umatshini wokuqinisa induction, induction Ukuqinisa ixabiso lomatshini, Ixabiso lokungenisa induction, Inkqubo yokwenza lukhuni, Induction yokuqinisa ubuso, Inkqubo yokwenza lukhuni, yintoni ukuqina kwe-induction Post yokukhangela